Swedish mari | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
Home Swedish mari RSS
The Swedish mari(Krona) yave nemari Sweden kubva 1873. Zvinonzi rakabudiswa Swedish Bank, Sveriges Riksbank. In Chirungu, mari iri Kazhinji aitaura sezvo korona Swedish (Krona chinoreva korona muna Swedish). Mumwe Krona ari rakamuka-kamuka 100 sendi. Kunyange zvakadaro, mhangura Mari zvose raizosungirirwa ave September 30, 2010. Products zvichiri zvinofungidzirwa mu esimbi, Zvisinei kana kubhadhara mari aggregates zvose vari akararamawo dzepedyo Krona. Mari izvozvi zvishandiswe vari 1 Krona, uye 5 uye 10 korona. Banknotes vari muzvikwata pamusoro 20, 50, 100, uye 500 korona.
Sweden ave achiita chinhu zvinobetsera nzira youpenyu, nokuti kutema mucheto kumakambani evanhu, rwakafara evanhu zvakwakanakira, chinhu yepamusoro kufambiswa framework, uye zvakatodzika unyanzvi basa simba. Upfumi ari nesimba rakamiswa kuti kunze Exchange, kushandisa chinokosha nehwaro matanda, hydro simba, nesimbi chicherwa. The chimbichimbi yose nemari 2008 yadzikira yokufamba mubereko uye utilization, kuunza pamusoro upfumi wokuSweden kuti hadzitedzemuki kupinda shure zvisinei mari zvayo zvikukutu uye zvinokosha zvinokosha. Solid vazviziva zvakaenda akawedzera yakasimba dauka shure mugore 2010 kuti 2011.
Currency Swedish dzaitaurwa 1873, supplanting ari Riksdalersgatan. The mari yakanga inopiwa mugumisiro of Air Monetary Union pamwe Norway uye Denmark, izvo akaramba kuenda kusvikira Hondo Yenyika I. Monetary siyana pasi kutengeserana vaiva pasi hwakanakisisa pamwero. The Monetary Union akapedza pamwe kugabhuka-up Hondo Yenyika I muna 1914. Sweden mapfumo chemhando yepamusoro pamwero musi August 2, 1914, uye asina zvakachinjwa swapping akamboona mubatanidzwa akasvika kuguma.
By pakumubira, Sweden hunodiwa kuti abatane eurozone uye atendeukira utilizing ari Euro. Ivai kuti hazvo, YeSweden vakawanda vari kurwa kugamuchira coin.On September 14, 2003, makumi mashanu navatanhatu muzana vavhoti vakanga dzaigara panze vakaramba kugamuchira Euro. Hwokushandisa vachapukunyuka muvaravara, hurumende muSweden vakanonga kwete kuti abatane ERM II, mumwe precondition pakugamuchira Euro.